ODUU Hatattama : Galaalchessaan OMN Guyyoo Waariyoo to’annoo jala oole – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsODUU Hatattama : Galaalchessaan OMN Guyyoo Waariyoo to’annoo jala oole
ODUU Hatattama : Galaalchessaan OMN Guyyoo Waariyoo to’annoo jala oole.
#OduuCabsaa-(SQ-ADOOLESSA 17/2020) Galaalchessaan OMN Guyyoo Waariyoo humna waraanaan Finfinnee keessatti ukkaamsuun Maatii isaa afaan Qawween doorsisan.
Artist Hacaaluu Hundeessaa Ajjeefamuu duratti galaalchessaan OMN Guyyoo Waariyoo gaaffii waliin godhuun ni yaadatama.Haadha Alangee Federaalaa Aadde Adaanech Abeebee ibsa miidiyaaleef kennaniin Afgaaffii Guyyoo Waariyoo Artist Hacaaluu Hundeessaa waliin gaggeesse irratti akka qaamni shanee jedhamu Isa doorsisaa jiru dubbatee ture garuu OMN kutee dhiyyeesse jechuun dubbatanii turan. Akkasumas Obbo Shimallis Abdiisaa OMN Hacaaluu qalmaaf dhiyyeesse jechuun waan dubbadhu jedhame dubbatee ture.
Galaalchessaan OMN Guyyoo Waariyoo Afgaaffii BBC afaan Oromoo waliin godheen Artist Hacaaluu Hundeessaa Kan ana waliin gaaffii fi deebii godhe irratti addatti baasee shanee qaamni jedhamu na doorsisaa jira hin jenne Kan akkas jedhus him citne jechuun dhugaa dubbachuu isaa ni yaadatama.
Guyyoo Waariyoo lubbuu isaaf akka sodaatus dubbachaa tureera . sababa isaatti maatiin isaa Negellee Booranaa jiran illee hidhamuu dubbateera.
Guyyaa har’aa humni waraanaan baay’inaan 7 tahanii fi huccuu siviliidhaan tikootni baay’inni isaanii 4 tahan bakka inni jiraatu deemuun qabanii deemaniiru.
Maatiin galaalchessaa Guyyoo Waariyoo eessa geessitu jedhanii yeroo gaafatanitti afaan Qawween maatiin Guyyoo Waariyoo doorsisuun akka Isa fudhatanii deeman odeessi arganne no ifoomsa. Abbaa Irree of irraa gatnu malee Oromoo go Oromiyaan nagaan hin jiraatan.